‘मैले गरेका काम जीतको आधार’ « Anumodan National Daily
‘मैले गरेका काम जीतको आधार’
प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७४, आईतवार ०६:१९
लामो समयदेखि शिक्षा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा सक्रिय गीता राणा तीन पटक एन–प्याबसनको अध्यक्ष, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य, नेपाल स्वीमिङ एसोसिएसन र नेपाल जिमनाष्टिक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहिसकेकी छन् ।
२०६४ सालमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट समानुपातिक सभासद राणा अहिले कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार रहेकी छन् । उनसंग अनुमोदन दैनिकका लागि संवाददाता शेरबहादुर ऐरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट
प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार
-किन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो ?
मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुको कारण पार्टीको आस्था, विचार, सिद्धान्तको संरक्षण गर्न हो । हाम्रो पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक देशको ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रसमा गएर एकीकरण भयो । ठूलो पार्टीको एजेण्डा भनेको विकास मात्र हो, तर हाम्रो पार्टीको एजेण्डा वर्ग, समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, खोला नालाको संरक्षण गर्ने लगायत हो । हाम्रो सिद्धान्त, विधि, तरिका फरक छ । हरेक ठाउँमा विकल्प चाहिन्छ, प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । जबसम्म विकल्प हुँदैन तबसम्म देश विकासको बाटोमा अघि बढ्दैन । जनताले विकल्प पनि पाओस् भनेर मैले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएकी हुँ ।
-क्षेत्र नम्बर ४ बाटै उम्मेदवारी किन ?
क्षेत्र नम्बरमा ४ मा धेरै ससाना समस्या छन् । अन्य दलले विकासका ठूला–ठूला आशा देखाउँदै उम्मेदवारी दिएका छन् भने मैले साना–साना समस्याको समाधान गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको छु ।
-तपाईको प्रतिस्पर्धा को संग हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभामा बाम गठबन्धनका लेखराज भट्ट, लोकतान्त्रिक गठबन्धबाट सुनिलकुमार भण्डारी उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यस्तै, जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी, विवेकशिल साझा पार्टी लगायत पनि छन् । मेरो यी सबैसंग प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
– तपाईंको जित्ने आधार के हुन?
जनताले सरल, सक्षम र केही काम गरेर देखाउने उम्मेदवार रोज्छन् । मैले यस क्षेत्रको विकासका लागि सांसद हुँदा र नहुँदा पनि धेरै काम गरेको छु । यस क्षेत्रका महिलाको सशक्तिकरणका लागि काम गरेकी छु । सडक ग्राभेल, दुई वस्ती जोड्न कल्र्भट निर्माण लगायतका काम गरेकी छु । मेरो कामको मूल्यांकन गरेर नै जनताले मत दिने अपेक्षा गरेकी छु । मैले गरेका कामहरू नै जित्ने आधार हुन् । मेरो सांसद कोष यसै क्षेत्रमा खर्च गरेको छु । बाटो घाटो ग्राभेलिङ गर्ने, मन्दिर निर्माण गर्न, विद्यालयको भवन निर्माण, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने लगायत धेरै काम गरेको छु ।
-चुनाव प्रचार–प्रसार कस्तो भइरहेको छ ? मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाईराख्नुभएको छ ?
म जनताको अगाडि गएर आफ्नो परिचय दिंदैछु र मैले गरेका कामबारे पनि जानकारी गराइरहेकी छु । मैले यो क्षेत्रका लागि अझै के गर्नुपर्छ भनेर सुझावसंगै यस क्षेत्रको विकास, महिला शसक्तिकरण गर्न लगायतका विषयमा मानिसहरूलाई तरिका पनि सिकाइरहेकी छु । म घरदैलो अभियानमा जाँदा मतदाताहरूले राजनीतिक दलहरूले भोट पाउनका लागि थुप्रै आश्वासन दिने तर, जितेर गएपछि फर्केर पनि नहेर्ने गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । मदाताहरूले आफूहरूलाई आश्वासन दिने भन्दा पनि काम गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने बताइरहेका छन् ।
-यस क्षेत्रको समस्या के हुन् ?
यस क्षेत्रमा विकाससंगै मानिससंग जोडिएका थुप्रै समस्या रहेका छन् । वर्ग अनुसारको समस्या फरक छ । किसानको समस्या भनेको समयमा मल नपाउने, विउविजन नहुने, सिंचाईको व्यवस्था नहुने हो । महिलाहरूका लागि तालिम नभएपछि आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने ? युवाहरूको समस्या बेरोजगार हो । व्यवसायीहरूका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू छैनन् । बालबालिकाहरूलाई राम्रो, गुणस्तरिय शिक्षाको व्यवस्था छैन । अल्पसंख्यक जातजातिहरूको जीवनस्तर धेरै तल रहेको छ । पुलहरू नहुँदा एक वस्तीदेखि अर्को वस्ती पुग्न सकिएको छैन, पानी निकासको समस्या यहाँ उस्तै छ ।
-तपाईको मुख्य एजेण्डा के–के हुन् ?
विकासका एजेण्डा सबै राजनीतिक दलका हुन् । मैले विकाससँग–सँगै मानिसको सशक्तिकरणमा जोड दिएकी छु । विकासका नाममा हामीले धेरै बाटो पुलहरू बनाउँछौं, तर खोला नाला, रुख, हिमालहरूको संरक्षणमा ध्यान दिएका छैनौं । मैले विकासका नाममा विनास नभई हिमाल, पहाड, बोटविरुवा, जंगली जनावरको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छु । अहिले कैलालीमा कटानीको समस्या धेरै छ । म त्यो रोक्न पहल गर्छु । अहिले शहरभित्रैका वस्तीमा बाटो नहुनाले दुर्गम भइरहेका छन् । ती दुर्गम गाउँलाई सुगम बनाउन पहल गर्छु । यहाँ विभिन्न जातजातिका व्यक्तिहरूको बसोबास छ उनीहरूको संस्कृति, संस्कार, धर्मको संरक्षण गर्न पहल गर्छु र अल्पसंख्यक जातिको जीवनस्तर सुधार्न पहल गर्ने छु ।